Koreana crypto fifanakalozana manomboka lalàna tena ezaka - Blockchain News
Aprily 18, 2018 Admin
Korea ny fifanakalozana cryptocurrency lehibe noho ny nanaovako an'i lalàna mba hampitombo ny mangarahara.
Nandritra ny valan-dresaka ao Seoul ny Talata, ny mpitarika ny 14 crypto an-toerana ao anatin'izany fifanakalozana Bithumb, Upbit sy OKCoin nanambara ny fitsipika. Izy ireo no mpikambana ao amin'ny Association Korea Blockchain.
Ny fikambanana dia nandinika rafitr'ity tontolo ity ny 14 fifanakalozana ary sivy vao tonga mba hahitana raha mahafeno ireo ny rafitra fitsipika. Na izany aza ny fisafoana mety hanana fiantraikany satria voafetra ny fitsipika tsy mamatotra ara-dalàna.
Mpikambana dia tokony hanaiky tena-maso tatitra ny fikambanana amin'ny alalan'ny May 8. Noho ny anjara, ny fikambanana dia manomboka ny maso ny mpikambana manomboka May 1.
“Ireo fitsipika fototra ireo fepetra takiana mba hahazoana antoka mangarahara crypto varotra,” nilaza ny fikambanana ofisialy.
Previous Post:Amazon crypto raki-daza ho an'ny angon-drakitra mifandraika patanty mikoriana
Next Post:Bitcoin ATM Network Coinsource miasa amin'ny lafin-javatra maro-authenticator Acuant
dlino hoy i:
Mey 20, 2018 amin'ny 5:51 PM
Dura hoy i:
Septambra 10, 2018 amin'ny 9:57 AM
Septambra 11, 2018 amin'ny 3:19 PM